၁၉ ရက်နေ့နံနက်တွင် နှင်းများကြောင့် Tohoku အမြန်လမ်းမ၌ ယာဥ်ဆင့်တိုက်မှုကြီးဖြစ်သွားခဲ့ !!! - JAPO Japanese News
ဟူး 20 Jan 2021, 14:04 ညနေ
မနေ့က ၁၉ ရက်နေ့နံနက် ၁၁ နာရီ မိနစ် ၅၀ အချိန်၊ Miyagi စီရင်စု Osaki မြို့ရဲ့ Tohoku အမြန်လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာ၊ နှင်းတွေကြောင့် ယာဥ်ဆင့်တိုက်မှုကြီး ဖြစ်သွားပြီး၊ အသက် ၆၀ အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးကာ၊ လူ ၁၇ ဦးကိုဆေးရုံပို့လိုက်ရပြီး၊ ထိုအထဲက ၂ ဦးဟာ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရမှုကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။
ဒီယာဥ်တိုက်မှုမှာ ကားအစီးပေါင်း ၁၄၀ စီးပါဝင်နေခဲ့ပြီး၊ ည ၈ နာရီကျော်လောက်မှာတော့ ကားအားလုံးရဲ့ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ရွေ့ပြောင်းခြင်းဟာ ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။
ယာဥ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ Furukawa interchange နဲ့ Chojahara service ဧရိယာကြားမှာဖြစ်ပြီး၊ ခန့်မှန်းချေ မီတာ ၉၀၀ လောက်တောက်လျှောက်ကားများဟာ မရွေ့လျားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ထိုအထဲမှာ ကားအစီးပေါင်း ၁၄၀ ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
မိုးလေဝသဌာနရဲ့အဆိုအရ ၁၉ ရက်နေ့ Miyagi စီရင်စုမှာလေတိုက်မှုပြင်းပြီး၊ ထိုအချိန်မှာပဲနှင်းတွေကျခဲ့ပါတယ်။ ထိုယာဥ်တိုက်မှုဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာ မွန်းတည့်အချိန်တွင်း အမြင့်ဆုံးတစ်ချက်လေတိုက်နှုန်းမှာ ၂၇.၈ မီတာရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုနေရာရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ လယ်ကွင်းပြင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင် ထိုလယ်ကွင်းထဲနှင်းများစုပုံနေပြီး၊ ထိုအချိန် လေပါတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက် မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးဟာဖြူဖွေးနေခဲ့ပါတယ်။
၎င်းမတော်တဆမှုအတွင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ ယာဥ်အားလုံးပေါင်း ၁၄၀ ခန့်ရဲ့ရွေ့ပြောင်းခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်းတို့ဟာ ည ၈ နာရီကျော်မှာ ပြီးစီးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖုံးကွယ်ခံလိုက်ရတဲ့ အမှန်တရား။ Petit Angel Case !!!